Nnwom 10 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Yehowa di boa mmɔborɔwa
Ɔdebɔneyɛfo ka sɛ: “Onyankopɔn biara nni hɔ” (4)
Mmɔborɔwa de n’ani to Yehowa so (14)
“Yehowa yɛ Ɔhene daa daa” (16)
ל [Lamed] 10 O Yehowa, adɛn nti na wugyina akyirikyiri? Adɛn nti na edu ahohia bere a, wode wo ho hintaw?+ 2 Ɔdebɔneyɛfo yɛ ahantan, enti ɔtaataa mmɔborɔwa;+Nanso nea wabɔ ne tirim sɛ ɔbɛyɛ no, ɔno ara na ebesum no afiri ayi no.+ 3 Ɔdebɔneyɛfo de n’ankasa* akɔnnɔ bɔne hoahoa ne ho,+Na ohyira odifudepɛfo;*נ [Nun]Obu Yehowa animtiaa. 4 Ɔdebɔneyɛfo ahomaso nti, ɔnhwehwɛ Onyankopɔn;Ne tirim adwene nyinaa ne sɛ: “Onyankopɔn biara nni hɔ.”+ 5 N’akwan si no yiye daa.+Nanso w’atemmusɛm boro ne ntease so;+Wɔn a wɔtan no nyinaa ho yɛ no serew. 6 Ɔka wɔ ne komam sɛ: “Merenhinhim da;Awo ntoatoaso kɔ ma awo ntoatoaso ba mpo a,Mmusu remma me so da.”+ פ [Pe] 7 Nnome, nkontompo ne ahunahuna ahyɛ n’anom ma.+Mmusu ne bɔne ayɛ ne tɛkrɛma so ma.+ 8 Nkuraa-nkuraa na ɔtetɛw;Ɔkɔhyɛ sum ase kum nea ne ho nni asɛm.+ ע [Ayin] N’ani sa obi a ɔmpɛ ne ho asɛm.+ 9 Ohintaw te sɛ gyata a ɔtɛw ne hintabea.*+ Ɔretwɛn atow ahyɛ mmɔborɔwa so akyere no. Ɔtwetwe n’atena de kyere mmɔborɔwa kɔ.+ 10 Ɔma nea ɔmpɛ ne ho asɛm hwe ase;Ɔmoa* nea ne ho nni asɛm. 11 Ɔka wɔ ne komam sɛ: “Onyankopɔn werɛ afi.+ Wayi n’ani ato nkyɛn. Onhu nea ɛrekɔ so.”+ ק [Qoph] 12 O Yehowa, sɔre.+ Onyankopɔn, ma wo nsa so ɛ.+ Mma wo werɛ mmfi mmɔborɔwa.+ 13 Adɛn nti na ɔdebɔneyɛfo bu Onyankopɔn animtiaa? Ɔka wɔ ne komam sɛ: “Woremmu me atɛn.” ר [Resh] 14 Nanso w’ani tua ɔhaw ne ateetee. Wuhu, na woyɛ ho biribi.+ Wo na mmɔborɔwa ani da wo so.+Agyanka boafo ne wo.+ ש [Shin] 15 Bubu ɔdebɔneyɛfo ne omumɔyɛfo basa,+Sɛnea ɛbɛyɛ a, wohwehwɛ n’amumɔyɛ a,Worenhu bio. 16 Yehowa yɛ Ɔhene daa daa.+ Amanaman no ayera afi asaase so.+ ת [Taw] 17 O Yehowa, ahobrɛasefo sufrɛ de, wubetie.+ Wubesiesie wɔn koma,+ na woayɛ aso ama wɔn.+ 18 Wubedi agyanka ne ɔwerɛhoni asɛm ama wɔn,+Na onipa dasani* anhunahuna wɔn bio.+
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Na nea ɔpɛ mfaso bɔne no hyira ne ho.”
^ Anaa “ɔtɛw dɔtɔ mu.”
^ Anaa “ɔde nsa a emu yɛ den moa.”
^ Nt., “onipa dasani a ofi asaase mu.”